News 18 Nepal || सरकार र सेनाबीच कोरोनाबाट ज्यान गएका व्यक्तिको विवरण किन फरक ?
सरकार र सेनाबीच कोरोनाबाट ज्यान गएका व्यक्तिको विवरण किन फरक ?
काठमाडौं । सैनिक प्रवक्ताको आधिकारिक ट्वीटरबाट शुक्रबार अपराह्न ‘सुख दुःखको साथी नेपाली सेना’ क्याप्सनमा ट्वीट सार्वजनिक भयो । ट्वीटमा कोभिड-१९ संक्रमणबाट ज्यान गएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनको तथ्याङ्क समेटिएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ताको ट्वीटमा धर्म, जात अनुसारको संस्कार गरिएको विवरण समेत उल्लेख थियो । तर, शव व्यवस्थापनको संख्या भने हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिरहेको तथ्याङ्क भन्दा निकै फरक थियो ।
मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७१५ उल्लेख गरेको छ । सेनाको शव व्यवस्थापन तथ्याङ्कमा ८८९ रहेको छ । सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र सरकारी तथ्याङ्कबीचमा १७४ केस नै फरक छ ।
ठूलो संख्यामा मृतकको संख्या फरक परेको हो । कोभिडबाट ज्यान गएकाको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । नेपालमा सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको केसलाई पहिलो मानिँदै आइएको छ ।
सेनाको विवरण अनुसार पूर्वी पृतनाबाट ९८, मध्यपूर्वी पृतनाबाट ५४ जनाको शव व्यवस्थापन भएको छ । यस्तै, मध्य पृतनाबाट १३९, पश्चिम पृतनाबाट १७, मध्यपश्चिम पृतनाबाट ८५ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै, उत्तर पश्चिम पृतनाबाट ४१ र सुदूरपश्चिम पृतनाबाट ११ शव व्यवस्थापन भएको छ । तर, सरकारको आधिकारिक मन्त्रालय र शव व्यवस्थापनमा खटिएको सेनाको आधिकारिक तथ्याङ्क भने मेल नखाएको हो ।
नेपालमा थप १,७४१ जनामा कोरोना पुष्टि, १५ जनाले गुमाए ज्यान
गण्डकी प्रदेशमा थप तीन जना कोरोना संक्रमितको निधन, को हुन् उनीहरु ?
कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ काठमाडौं, कुन वडामा कति छन् संक्रमित ?
‘जाडो महिनामा संक्रमण झन् बढ्ने, नेपालमा चार लाख संक्रमित पुग्ने’
कतारी राजदूत हेलले भने, ‘नेपाल स्वर्ग हो’
नेपालमा थप २,८५६ जनामा कोरोना पुष्टि, ५ जनाले गुमाए ज्यान